Daryeelkayaga yareynta xanuunka
Waxaan rumeysan nahay in carruurta sabiga ah iyo ilmaha roonba ay xaq u leeyihiin heerka ugu wanaagsan ee yareynta xanuunka ee sida badbaadada leh loogu qaban karo. Sidaa darteed waxaynu cuskanaa dadaal kooxeed si aynu u yareyno xanuunka iyo welwelka inagoo isticmaalayna hababka daaweynta jirka iyo niyaddaba. Dantayadu waa wada shaqeynta waalidka iyo shaqaalaha si loo ogaado xanuunka sida ugu dhaqsaha badan, loona daaweeyo sida ugu habboon.
Inkastoo dhallaanku weli korayo oo aanay inoo sheegi karin xanuunka, haddana way dareemaan xanuunka, xanuunkoodana waa la daaweyn karaa. Kooxda daryeelka caafimaadka waxay doonayaan inay sameeyaan inta ay kari karaan si ilmahaagu fayoobi u dareemo.
meesha qalliinka lagu sameeyay
fidinta ama riixidda jirka ama xubnaha
duritaanka sida xididka daawada laga qaato ama dhiigga labaarayo
Waxaa jira in dhallaanku erayo inoogu sheegi karin halka xanuunku ka hayo, sida ay ilmaha waaweyn inoogu sheegi karaan, laakiin waxaynu eegi karnaa astaamo ku saabsan sida ay u dhaqmayaan. Waxaa kaloo aynu xanuunka ku cabbiri karnaa u fiirsasho sida illmahu wax u sameynayo ama astaamaha jirka (sida wadno qaraaca, heerka neefsashada, cadaadiska dhiigga) si uu u ogaado in dhallaanku xanuun hayo, khaas ahaan ilmaha aadka u yar.
Ilmaha marka uu xanuunka hayo siyaabo ka duwan marka ay caadiga yihiin ayey u dhaqmaan. Cunug walba si qaas ah inuu u dhaqmo ayaa laga yaabaa, sidaa oo is beddeli karta mararka qaarkood. Eeg astaamaha hoos ku taxan.
Dhallaanku waxay u dhaqmaan siyaabo kala duwan oo astaan u ah xanuun. Calaamadaha waa ay dhici karaan iyadoon ilmahu xanuun hayn, laakiin isku jirkooda inta badan waa xaadir marka ilmahu xanuun hayo.
Oohin: Waxaa laga yaabaa in dhallaanku u ooyo si xiriir ah. Oohinta badanaa waa mid dhawaaqa iyo muddadu sii badato. Ilmaha aadka u xanuunsan ama dhiciska ah ee tabarta yar iyagoo xanuun hayo ayay aamusnaadaan.
Dhallaanka xanuunka hayo badanaa way caro badan yihiin, deggenaanshahooduna wuu yar yahay, cuntada wey diidaan mana seexan karaan
Waxa ay waalidka leeyihiin qeyb muhiim ah. Sababtoo ah adiga ayaa cunuggaaga ugu aqoon badan, waxaad si hoose ula shaqeyn kartaa shaqaalaha (sida dhakhaatiirta, kalkaaliyaasha, ama shaqaalaha maaweeliya ilmaha) si loo yareeyo xanuunka. Waxaad tahay qofka ugu habboon ee dhallaankaaga ka caawini kara xamilaadda marxaladaha cusub ama adag.
Inaad isticmaasho wax kastoo niyad ahaan dejin kara cunuggaaga ka hor iyo ka dibba markii marxalad welwel keeni karta ay jirto: si deggan oo loo salaaxo ama masaajeeyo dhallaanka, qabashada, yara ruxidda ama cod dejinaya oo loogu sheekeeyo. Waan kugu caawin doonaa si aad u go’aansato habka ugu fiican ee dejinaya dhallaankaaga.
Xanuunku waa mid saameeya jirka iyo niyaddaba. Ilmahu waa ay dareemaan xanuunka jir ahaan, waxyaabaha ay dareemaan waxaa ka mid ah dareemid gubasho, wax ku taagan ama majiirid. Waxa kale oo ay ka fikiraan ama xasuustaan xanuunka niyad ahaan. Maadaamaa aanay dhallaanku hadli karin, waa ay nagu adag tahay inaan si xaqiiq ah u ogaanno waxay ku fikirayaan iyo sida ay u xusuustaan dareenka. Waxaanse isku daynaa inta aan awoodno inaan yareyno dareenka iyo welwelka xanuunka. Waxyaabaha caawiya si loo yareeyo welwelka iyo xanuunka waxaa ka mid ah:
Beddelidda jawiga dhallaanka. Dhawaqa iyo waxqabadka oo lagu yareeyo sariirta agagaarkeeda waa ay dejinaysaa dhallaanka.
In dhallaanku nuugo masaasadda furkeeda maran waxay ka caawisaa siduu ugu adkeysan lahaa waxyaabaha xanuunka keeni kara.
In loo qabto dhallaanku si dhaqaaqoodu u yaraado waa ay dejisaa. Sameynta sida Kaanguuradu u qabato dhasheeda oo kale ama u qabasho si maqaarku isu gaaro aad bay u dejisaa.
Salaaxidda ama riixidda fudud waxay caawisaa jaha wareerinta dareemayaasha xanuunka u gudbiya maskaxda taasoo keenta in maskaxdu aanay dareemin xanuun aad u badan.
Saaridda wax qandac ah ama qabow, meesha jugta ay gaartay waxay yaeryn kartaa xanuunka ka imman kara bararka murqaha dhaawacmay. (Waxaa sidan yeeli doona kalkaalisada.)
Kareemka kabaabyanta, sida EMLA® ama ELA-Max® waxaa la saari karo jirka si ay u kabuubiso. Inta badan waxaa la isticmaalaa duridda maqaarka ama xididka ka hor. Waa inay saarnaataa maqaarka ugu yaraan hal saac si ay u kabuubiso. Kama hortagto xanuunka oo dhan, laakiin waxay caawiso yareynta xanuunka. Badanaa looma isticmaalo dhallaanka haddii ay ku dhasheen in ka yar 37 isbuuc. Eeg warqadda barashada “Anesthetic cream” (“Kareemka kabaabyanta”).
Daaweynt xanuun meel ku kooban waxaa lagu sameeyaa in lagu duro lidocaine (kabuubiso) ka hor inta aan tuubbo la gelin ama hab kale la sameynin. Waxaa sidan ay la mid tahay isticmaalidda novocaine (kabuubisada) ee dhakhtarka ilkaha.
Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) waxay yareeyaan xanuunka iyo bararka. Waxaa la iibsan karaa iyadoo aanu dhakhtar kuu qorin, waxayna naaqusiyaan xanuunka yar ilaa kan dhexe. Si ay u yareeyaan xanuunka caloosha, waa in lala qaato cuntada markii ay macquul tahay. Ibuprofen (Motrin®, Advil®, ama nooc kale) ayaa ka mid ah daawooyinka NSAID.
Acetaminophen (Tylenol® ama nooc kale) waa nooc kale oo ka mid ah daawooyinka xanuunka ee la iibsan karo iyadoo aanu dhakhtar qorin, taasoo caawisa daaweeynta xanuunka yar ilaa kan dhexe. Daawadan waa ay ka dhibaato yar tahay daawooyinka NSAIDs-ka, laakiinse ma yareyso bararka.
Narcotics waa daawwoyin aad u awood leh oo loo isticmaalo daaweynta xanuunka dhexe ilaa kan saa’idka ah, inta badanna la isticmaalo qalliinka ka dib. Waxaa laga siin karaa xididka ama afka. Daawoyinkan waxay keeni karaan dhibaatooyin sida jir cun-cun, lallabo, ama saxarada oo adkaato ama yaraata. Dhallaanku badanaa way ku hordoodaan daawadan neefsigooduna wuu isku dhimaa. Mararka qaarkood NSAIDs ama Tylenol iyo narcotics ayaa isku mar la wada isticmaalaa. Marka narcotics-ka afka laga qaato, waa in cunto lala qaataa si looga taxadaro lallabada. Si iyadana looga taxadaro saxarada oo adkaata ama yaraata, waa in ilmahaagu cabbaa cabbitaan badan, am faleebbo lagu duraa.
Warqaddani khaas kuma aha xaaladda cunuggaaga, balse waxay bixinaysaa akhbaar guud ahaaneed. Fadlan haddii aad su’aal qabto la hadal dhakhtarka ama shaqaalaha la shaqeynaya cunuggaaga. Dhakhtarkaaga ama kalkaalisadaada waxay kuu heli karaan khabiirada xanuunka ee isbitaalka. In xanuunka si wanaagsan loo daaweeyo waa dadaal kooxeed.